(126125) 2001 YF118
(126167) 2002 AL5
(126169) 2002 AR7
(126187) 2002 AA21
(126190) 2002 AK22
(126302) 2002 AO118
(126306) 2002 AR120
(126492) 2002 CQ56
(126581) 2002 CZ119
(126664) 2002 CV209
(126704) 2002 CV239
(126852) 2002 EV73
(126953) 2002 FM9
(126967) 2002 FR20
(126985) 2002 FU28
(127088) 2002 GC76
(127124) 2002 GJ102
(127131) 2002 GD106
(127160) 2002 GS140
(127168) 2002 GQ151
(127300) 2002 JN83
(127333) 2002 JQ111
(127425) 2002 OL18
(127490) 2002 TU18
(127518) 2002 UH16
(127647) 2003 CS15
(127688) 2003 EC16
(127694) 2003 EN20
(127707) 2003 EN28
(127719) 2003 EK40
(127789) 2003 FR66
(127804) 2003 FH80
(127838) 2003 FU107
(127848) 2003 FW111
(127853) 2003 FB113
(127859) 2003 FP115
(127897) 2003 GJ15
(127920) 2003 GH44
(127961) 2003 HA21
(128004) 2003 HY53
(128048) 2003 MG3
(128049) 2003 MA6
(128110) 2003 QJ15
(128134) 2003 QX46
(128140) 2003 QK56
(128228) 2003 SV123
(128250) 2003 SB238
(128308) 2004 BV72
(128335) 2004 FP79
(128361) 2004 HP18
(128381) 2004 JB35
(128444) 2004 NQ16
(128769) 2004 RJ193
(128931) 2004 TB84
(128971) 2004 TW163
(128974) 2004 TK169
(129012) 2004 TM307
(129013) 2004 TX310
(129023) 2004 TB336
(129029) 2004 TQ348
(129030) 2004 TR349
(129116) 2004 XN102
(129208) 2005 NO56
(129309) 2005 SJ194
(124767) 2001 SO240
Ny 2001 SO240 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 SV257 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
(124813) 2001 SD285
Ny 2001 SD285 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 1997 GP6 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
(124868) 2001 TL33
Ny 2001 TL33 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
(124933) 2001 TP75
Ny 2001 TP75 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
(124964) 2001 TV103
Ny 2001 TV103 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 TK131 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
(124991) 2001 TY143
Ny 2001 TY143 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 TP144 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
(125029) 2001 TF191
Ny 2001 TF191 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 TG221 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
(125092) 2001 UF25
Ny 2001 UF25 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 UD44 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 UR50 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
(125131) 2001 UU57
Ny 2001 UU57 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
(125153) 2001 UZ83
Ny 2001 UZ83 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 UP140 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 UE161 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 1998 HT147 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
(125275) 2001 VW11
Ny 2001 VW11 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 VV25 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 1998 MZ30 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 VT61 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 VU91 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1998 QX9 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
(125494) 2001 WY28
Ny 2001 WY28 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
(125525) 2001 WH51
Ny 2001 WH51 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
(125550) 2001 XY5
Ny 2001 XY5 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
(125570) 2001 XE19
Ny 2001 XE19 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
(125709) 2001 XG99
Ny 2001 XG99 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 XZ100 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
(125730) 2001 XV111
Ny 2001 XV111 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
(125755) 2001 XY127
Ny 2001 XY127 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
(125764) 2001 XG136
Ny 2001 XG136 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 XU156 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
(125806) 2001 XC159
Ny 2001 XC159 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
(125828) 2001 XT174
Ny 2001 XT174 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
(125849) 2001 XH184
Ny 2001 XH184 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 XZ189 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
(125881) 2001 XK202
Ny 2001 XK202 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 XX239 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 YH37 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
(126026) 2001 YP63
Ny 2001 YP63 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 YG67 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 YW74 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
(126060) 2001 YL80
Ny 2001 YL80 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
(126063) 2001 YH81
Ny 2001 YH81 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
(126086) 2001 YW94
Ny 2001 YW94 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 YL111 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...